Neymar oo diyaar u ah inuu Manchester…… – Gool FM
Neymar oo diyaar u ah inuu Manchester……
(Europe) 02 Maarso 2018. Neymar ayaa aad u doonaya inuu xagaaga isaga soo tago kooxda PSG oo iyadu dhawaan uun kala baxday lacagihii ugu badnaa ebid kubbada cagta.
Don Balon oo aalaaba ka faaloota arrimaha suuqa ayaa sheegeysa in wiilka reer Brazil uu ka fikirayo qorshaha labaad ee ‘Plan B’ iyadoo ay saxiixiisa ku dagaalamayaan kooxaha ka wada dhisan Magaalada Manchester ee United iy City.
Neymar ayaa dar dar galinaya dooqyadiisa badelka u noqon kara haddii uu ku biiri waayo Real Madrid oo iyadu dooneysa inay u soo dhaqaaqdo saxiixiisa marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga.
Kooxaha Man United iyo Man City ayaa si sahlan ku dhigi doonin tartanka ay ugu jiraan Neymar, Real Marid ayaana tixgalineysa inay tartan adag kala kulmi doonto saxiixa 26-jirka gaar ahaan kooxda Pep Guardiola.
Paul Pogba oo sheegay saddex ciyaaryahan oo uu jecel yahay in uu ka garab ciyaaro xilli mustaqbalkiisa Man United shaki ku jiro